युएईको अल–नाह्यान वंशः जसले मरुभूमिका घुमन्ते कबिला समाजलाई विश्व शक्तिमा बदल्यो - Janasamsad
युएईको अल–नाह्यान वंशः जसले मरुभूमिका घुमन्ते कबिला समाजलाई विश्व शक्तिमा बदल्यो
४ असार २०७९, शनिबार २१:४८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । ५० वर्ष अघि तिनको पहिचान अरबी प्रायद्वीपको मरुभूमिमा बसेको कबिला राज्यहरू एक समूहको रूपमा थियो । लगभग आधा शताब्दीपछि, पहिलेका खुला खुल्ला बजार र पालका घर रहेको स्थान गगनचुम्बी भवनहरूले भरिएका छन् ।
आज त्यहाँ अरबी प्रायद्वीपमा सबैभन्दा ठूलो कला सङ्ग्रहालय पेरिसको लुभ्र सङ्ग्रहालयको शाखा खोलिएको छ । त्यहाँ न्यूयोर्क विश्वविद्यालय तथा पेरिसको सोर्बोन विश्वविद्यालयका विभाग खुलेका छन् ।
आज त्यहाँ संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन, सबैभन्दा भव्य होटल (सात तारे होटल), संसारको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ (लियोनार्डो दा भिन्चीको साल्वाटर मुन्डी ) र विश्वको सबैभन्दा ठूलो सपिङ सेन्टर छ ।
एक प्रमुख वैश्विक शक्ति
पर्सियन खाडीको किनारमा अवस्थित युएई आधा शताब्दीभन्दा कम समयमा एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनेको छ । यस परिवर्तनका लागि विज्ञहरु शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानलाई जस दिन हिचकिचाउँदैनन् । उनको गत महिना मे २०२२ मा ७३ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
अबु धाबीका शासक र युएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानले क्षेत्रीय विकासको बलमा आफ्नो देशलाई विश्वको नक्सामा स्थान बनाए ।
सन् २०१४ मा मस्तिष्कघात भएपछि उनले शासनको नियमित काम छाडे तर उनको उपस्थिति जताततै देखिन्थ्यो । उनको तस्बिर होटेलको लबी, सरकारी कार्यालय र पसल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा जताततै देखिन्थ्यो ।
सरकारी कामको निरीक्षण स्वाभाविक रूपमा उनका सौतेनी भाइ मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको हातमा गयो । उनी पहिलेदेखि एमिरेट्सको विदेश नीतिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । र शेख खलिफाको मृत्युपछि मोहम्मद बिन जायद अहिले देशको राष्ट्रपति बनेका छन् ।
शेखहरूको यो वंशले कसरी आफ्नो देशलाई मध्य पूर्वको एक कबिलायी राज्यबाट सो क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली देशमा परिणत गर्न सफल भयो त ?
सात कसरी बन्यो युएई ?
सन् १९६० को दशकसम्म यो क्षेत्र बेलायती नियन्त्रणमा थियो । सो दशकको उत्तरार्धमा बेलायतले अरबी प्रायद्वीप छोड्ने निश्चित जस्तै भएको थियो ।
भारतमा बेलायती शासन हुँदा बेलायत र भारतबीच आउजाउ गर्ने जहाजमाथि अरबी क्षेत्रका केही लडाकु कबिलाले लुटपाट गर्थे ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि र अरबी क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको माग बढ्न थालेपछि बेलायत यस क्षेत्र छोड्ने निर्णयमा पुग्यो ।
बेलायतले छाड्ने तयारी गरिरहेकै समयमा सो क्षेत्रका ६ बलियो कबिला समाजहरू दुबई, अबुधाबी, शारजाह, अजमान, उम अल क्वाइन, फुजैराहका शेखहरूले एक परिषद् गठन गरे । यो परिषद् उनीहरूबिच सीमालाई लिएर भइरहने विवाद मिलाउन गठबन्धन गरिएको थियो ।
स्पष्ट सिमाना नछुटिएका घुमन्ते समाज भएकाले उनीहरूबिच पटक पटक प्रभाव क्षेत्रलाई लिएर विवाद भइरहन्थ्यो । तर परिषद्ले विवाद मात्र मिलाएर बिस्तारै एकीकृत राज्य निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।
७ एमिरेट्समध्ये आकार र प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो अबु धाबीका तत्कालीन अमिर जायद बिन सुल्तान अल–नाह्यान (खलीफा र मोहम्मदका पिता) देशको पहिलो राष्ट्रपति चुनिए ।
स्वतन्त्रताभन्दा केही अघि नै एमिरेट्समा तेल पत्ता लागिसकेको थियो र तेल विक्रीबाट आएको आयको ठूला मात्रा अर्थव्यवस्थामा खनाइयो । साथमा ती आयलाई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन थालियो ।
‘डिजर्ट किंगडम टु ग्लोबल पावरः द राइज अफ द अरब गल्फ’मा लेखक इतिहासकार रोरी मिलरका अनुसार अरबी मुलुकहरूले तेलको आम्दानीलाई सरोकारवालाहरूबीच बाँडफाँडको मजबुत प्रक्रिया निर्माण गरे । यसले गर्दा उनीहरूबिच द्वन्द्व हुन पाएन । परिणाम स्वरुप यो क्षेत्रले आर्थिक सफलता पायो ।
साथमा उनीहरुले तेलबाट बेचेर बचेको रकमलाई स्थिर सम्पत्तिहरू घर जग्गा, कला र स्टक रूपान्तरण गरेर पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरे ।
जेबल अली फ्री जोन
युएईका सबै सदस्य इमिरेट्समा समान रूपमा तेल उपलब्ध थिएन । यसले गर्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने अबुधाबी सम्पूर्ण मुलुकको विकासको सबैभन्दा ठूलो चालक बन्यो ।
अर्ध–स्वायत्त इमिरेट्स भएकाले, अलग अलग एमिरेट्सले आआफ्नै विकासका विकल्पहरु खोज्न थाले । यसले पनि तिनीहरूको अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
जस्तो केही इमिरेट्सले पर्यटनमा सफलता कमाएका छन् । अरूले विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।
आर्थिक विकासको विकल्प खोज्ने क्रममा दुबईले सन् १९८५ मा व्यावसायिक बन्दरगाह र व्यापारिक केन्द्र जेबेल अली फ्री जोन स्थापना ग¥यो ।
स्थापनाको लगभग ४० वर्षपछि पनि यो संसारको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । अझ अहिले यो धेरै गुणाले बढिसकेको छ ।
समुन्द्र, आकाश र स्थल मार्गबाट जोडिएको यस बन्दरगाहले आज युएईको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट, भन्सार शुल्क लाभ दिने भएकाले धेरै यहाँ लगानी गर्न आउँछ ।
युएईका संस्थापक जायद बिन सुल्तान अल–नाह्यानको दूरदर्शिताका कारण उनको मुलुकले २० औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्व नक्सामा स्थान बनाउन सक्षम भयो ।
शेख खालिफा र उनका सौतेनी भाइ मोहम्मदले तिनको पिताको सपनालाई २१ औ शताब्दीमा अघि बढाएका छन् ।
नयाँ शताब्दी – युएईको विकासका लागि शेखले के गरे ?
संयुक्त अरब इमिरेट्सका दोस्रो राष्ट्रपति खलिफाले उनको शासनकालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन् २००८ मा दुबईमा आएको आर्थिक सङ्कटका रूपमा आयो ।
शेखले दुबईलाई उद्धारका लागि उसको कोषमा करोडौँ डलरको राहत कोष जारी गर्ने निर्णय लिए । पछि दुबई विश्वको सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज दुबई निर्माण गर्ने स्थितिमा पुग्यो ।
जनवरी २०१० मा आधिकारिक उद्घटन भएको यो भवनलाई खलिफाको नामसँग जोडेर बुर्ज खलिफा भनिन्छ ।
समग्रमा एमिरेट्सका शासकहरुले तेल सम्पदाको प्रयोग गरेर त्यस भेगमा सांस्कृतिक र शैक्षिक केन्द्रलाई आकर्षित गर्न थाले । यसले विदेशमा तिनको छवि बढ्यो ।
इमिरेट्सले ठूल–ठूला कम्पनी, ठूला घरजग्गा व्यवसाय, वित्तीय संस्था, ठूला ब्रान्ड र यहाँसम्म की फुटबल क्लब(जस्तै म्यानचेस्टर सिटी)मा लगानी गरिएको छ ।
एमिरेटले हालैका वर्षहरूमा पश्चिमका केही महँगो भवनको निर्माणमा पनि लगानी गरेको छ ।
अबु धाबी इन्भेस्टमेन्ट काउन्सिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष हो । सोभरेन वेल्थ फण्ड इन्स्टिच्युटको अनुमान अनुसार योसँग ७०० अर्ब डलर छ ।
शेख खलिफाले तेलमाथिको निर्भरता कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास सुरु गरेका थिए । तथापि निर्यातका लागि भने उनले तेल र ग्यासमा लगानी बढाइदिए ।
सन् १९९९ मा नेटोको समर्थनमा आफ्नो सेना कोसोभो पठाएको युएई, युरोपमा आफ्नो सेना पठाउने पहिलो आधुनिक अरबी मुलुक हो ।
युएई अहिले यमन युद्ध र लिबियाको गृह युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न छ । पहिलेदेखि आर्थिक शक्ति युएई अहिले यो क्षेत्रको सैन्य शक्ति गनिन थालेको छ।
कचनकवलमा एक वर्षमा २४५ जना सर्पले टोकेका बिरामीको उपचार
झापा कारागारभित्रको बेथिति बारे छानबिन हुने, सुरक्षा इन्चार्ज फेरबदल
चीनले भन्यो – एसपीपी अगाडि नबढाउने नेपालको निर्णय स्वागतयोग्य
९ असार २०७९, बिहीबार २१:३९
८ असार २०७९, बुधबार ०७:५७
पाकिस्तान संकट : बिहेमा एउटाभन्दा परिकार बनाउन नपाइने– नेपालसँग के छन् समानता ?
२ असार २०७९, बिहीबार १०:३०
विश्वभर फैलिँदै मंकीपक्स, फ्रान्समा संक्रमित हुने ५१ जना पुगे
२१ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०९:३७